Tea Shop | Chiya Pasal | A Story By Santosh Basnet | NAJ Entertainment
Home Story Tea Shop | Chiya Pasal | A Story By Santosh Basnet
Tea Shop | Chiya Pasal | A Story By Santosh Basnet
चिया पसल – कथा
– सन्तोष बस्नेत –
“आन्टी! चिया पिउँ त एक कप।” अगाडिको बेन्चमा बस्ने बित्तिकै बोलेँ म।
“चिया!” उसले मेरो अगाडी चिया तेर्स्याउँदै मधुरो स्वरमा बोली। मैले पत्रीकाबाट नजर हटाएर उसको अनुहारमा हेरेँ अनि अलिकती मुस्कुराउँदै चियाको गिलास पकडेँ। गिलास पकड्दा मेरा चिसा औँंलाहरुले उसका कोमल अनि न्याना औँलाहरुमा हलुका स्पर्स गरे। मैले चिया पकड्ने बित्तिकै उसले आफ्नो हात तानी अनि फनक्क फर्किएर गइ।
”ए निरु! म कोठा पुगेर आउँछु। एकछिन् हेर्दै गर् है?” आन्टी पसलबाट बाहिर निस्किँदै बोलिन्। उसले मौन स्विकृती दिइ। आन्टी पसलबाट केहि पर पुगेपछी मैले बोलेँ “ए साहुनी! एउटा चुरोट पाउँ न।” उसले म तिर पुलुक्क हेरि अनि रिसाए झैँ मुख फुलाइ।”सुर्य चुरोट है साहुनी?” मैले उसको अनुहारमा हेरेर मुस्कुराउँदै बोलेँ। उसले मलाइ खाउँला झैँ गरेर आँखा तरी। मैले आफैँ नजर झुकाएर पत्रीकामा लगाएँ।
“लु!” उसले चुरोटको खिल्लि म तिर तेर्स्याउँदै बोलि। मैले चुरोटको खिल्ली पकड्द्दै उसको अनुहारमा हेरेँ। उसले उस्तै रिसाएर मलाइ हेरिरहेकी थिइ। मैले नजिकै रहेको सलाइ तानेर चुरोट सल्काएँ। सल्काउने बित्तिकै उसले मेरो मुखबाट चुरोट तानेर भुइँमा फ्यालिदिइ। मैले हाँंस्दै उसको अनुहारमा हेरेँ। उसका आँखा राता भएका थिए अनि मुख भने उस्तै फुलिरहेको थियो। मैले उसको अनुहारमा हेर्ने बित्तिकै ऊ फन्किएर पर कुर्सिमा गएर बसि। म त्यहिँ बसेर उसलाइ हेर्दै मुस्कुराइ रहेँ।
केहिबेरमा चिया सकियो। मैले उठेर पर्सबाट पैसा निकाल्दै बोलेँ “साहुनी पैसा लिनुस्।”मलाइ रिस नउठाउनुस् है धेरै।” ऊ मुर्मुरिँदै मेरो छेउमा आइ।
“भोलि पठाइदिनु नि त। छुटेको म पढाइदिउँला। भोली सनिबार म पनि फुर्सदै हुन्छु।” मैले सानो स्वरमा बोलेँ। आन्टिले केहि बोलिनन्। सब्जी केलाइ रहिन्। उसले चिया ल्याएर दिइ। मैले पकड्दै बोलेँ “भोली आउनु, म छुटेको पढाइ दिउँला।”कति बजे?” सानो स्वरमा उसले सोधी।”छुट्टिको दिन आठ बजे सम्म त म सुतेको हुन्छु। त्यसपछी जतिखेर आए नि हुन्छ।” मैले हाँस्दै बोलेँ। ऊ पनि अलिकती मुस्कुराइ।
“किन खोल्नु कक्षा? तिमि एक्लै त हौ। माथी हिँंड कोठामा नै सिकाइदिन्छु।” यति भनेर म माथी कोठातिर लागेँ। ऊ पनि चुपचाप मेरो पछि आइ।कोठामा पसेपछी मैले ढोका बन्द गरेर चुकुल लगाएँ। उसले अनौठो नजरले मलाइ हेरि तर केहि बोलिन। ऊ पलङको छेउमा बसि अनि किताब र कपि फिँजाउन थाली।
“तिमिले त कहिलेकाहिँ मनलागी लिन्छौ त चियाको दाम।” म हाँसिदिएँ। ऊ पनि म संगै हाँसी। म उसको छेउमा बसेँ। उसका र मेरा तिग्रा जोडिए। उसका तिग्राको न्यानोले मलाइ सिरिङ्ग बनायो। ऊ फनक्क म तिर फर्किइ अनि मेरो गर्धनमा पकडेर ओठमा ओठ ओठ जोडाइ। लगत्तै ओठ झिकी अनि भुइँ तिर नजर झुकाएर हाँस्दै बोलि “यतिले त पुग्छ होला नि हजुरलाइ एक्स्ट्रा क्लासको फिस्?”
उसले मेरो ढाडमा हात लगेर लजालु मुस्कुराहटको साथ टाउको हल्लाएर स्विकृती दिइ। मैले मेरा ओठलाइ उसका ओठमा खप्ट्याइ दिएँ। उसले आँखा बन्द गरि। मेरा ओठका बिचमा उसको तल्लो ओठ चेपियो केहिबेर। उसका हातहरु मेरा ढाडमा अझै कसिन थाले। बिस्तारै उसका पनि ओठहरु सलबलाए। केहिबेरमा नै हाम्रा जिब्राहरुको एकआपसमा स्पर्श हुन थाल्यो। मैले उसलाइ बिस्तारै पलङमा लडाएँ अनि उसको छातिमा मेरो छाती खप्ट्याएँ। उसको कोमल छातिको स्पर्षले मेरो मुटुको धड्कन तेज हुन थालेको थियो। उसको पनि स्वासको गति तेज भएको थियो। मैले मेरो एउटा हात उसको कम्मरमा हुँदै कुर्ता भित्र हालेर उसको पेटमा राखेँ। उसको पेट सासको गति संगै तलमाथी गर्न थाल्यो। उसको न्यानो सरिरको स्पर्शले मेरो हात तातो भयो। मैले मेरो हातलाइ कुर्ता भित्रैबाट उसको छाती तिर लग्न खोजेँ। कुर्ता शरिरमा टिमिक्क मिलेको भएर मेरो हात छिर्न मुस्किल हुँदै थियो।
”मेरि आमाको म बाहेक अरु कोहि छैन। हामीले बिहे गरेपछी मेरि आमाको बारेमा केहि सोच्नु भएको छ?” उसले मेरो अनुहारमा माया लाग्दो तरिकाले हेर्दै बोलि। मैले कहिले त्यो बारेमा सोचेको थिइनँ। मलाइ ऊ सँग बिबाह गर्न मन थियो। मेरि आमाले चाहे जस्तै घर गरिखाने बुहारी भित्र्याइदिने रहर थियो। तर मैले कहिले सोचेको थिएन कि “उसकी आमाको जिम्मेवारी पनि निरु संगै छ” भनेर।
सायद, उसले चाहे जस्तो उत्तर मैले दिइन। त्यसैले उसको अनुहार अझै खस्कियो। मैले उसलाइ अझै नजिक तानेर छातिमा जोडले कसेँ। ऊ केहि नबोली चुपचाप छातिमा टाँसिइरहि। ”अनि पढ्न पर्दैन?” केहिबेरमा मैले उसलाइ झकझक्याउँदै सोधेँ। ऊ लजाए झैँ मुस्कुराउँदै उठेर कपडा लगाउन थाली। म पनि ऊ संगै उठेर कपडा लगाएँ।
म्यासेजमा लेखेको थियो “बधाइ छ सर। बिहे गर्नु भएछ, खुशी लाग्यो। म्याडमलाइ धेरै माया गर्नुहोला।”म्यासेज देखेर एकपटक झनक्क रिश उठ्यो। फेरि उसको बारेमा जान्न मन पनि लाग्यो। मैले ढिला नगरी उसको प्रोफाइल खोलेर हेरेँ। प्रोफाइल फोटोमा उसको समुन्द्र छेउमा उभिएको चिटिक्क परेको फोटो थियो। फोटोको मुनि पटि लेखिएको थियो “Lives in California”।
Previous articleElection Getting Viral On Facebook And YouTube
Next articleअमेरिका बस्नेहरुको लागि आयो खुसि को खबर ! जान्नको लागि तल को लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्
I Feel Embarrassed – A Story Of Loving Couple
US Visa – A story by Prakash Chhetri